के तपाईं वा तपाईंको पार्टनर गुनासोको हकदार हुनुहुन्छ? Law & More तपाईंलाई मद्दत गर्दछ
तलाक कानून » पार्टनर एलिमोनी
के तपाईं वा तपाईंको पूर्व पार्टनरसँग सम्बन्ध विच्छेद पछि बाँच्नको लागि पर्याप्त आय छैन? त्यसोभए अर्को पार्टनरको भूतपूर्व पार्टनरलाई भुक्तानी गर्ने दायित्व हुन्छ।
तपाइँ तपाइँको भूतपूर्व पार्टनरबाट भत्ता पाउन कहिले पाउनु हुन्छ? सिद्धान्त रूपमा, तपाईं पार्टनर गुनासोको हकदार हुनुहुन्छ भने, सम्बन्ध विच्छेद पछि, तपाईं आफैंलाई समर्थन गर्न पर्याप्त आय छैन।
सहयोगी साथीलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ?
> पार्टनर पोटलीको स्तर
> गणना हिसाब गर्दै
> बिरामी बदल्दै
तपाइँ तपाइँको भूतपूर्व पार्टनरबाट भत्ता पाउन कहिले पाउनु हुन्छ?
सिद्धान्त रूपमा, तपाईं पार्टनर गुनासोको हकदार हुनुहुन्छ भने, सम्बन्ध विच्छेद पछि, तपाईं आफैंलाई समर्थन गर्न पर्याप्त आय छैन। विवाहको समयमा तपाईंको जीवनस्तरलाई ध्यानमा राखिनेछ ताकि तपाईं पार्टनर भत्ता पाउन योग्य हुनुहुन्छ कि भनेर निर्धारण गर्न। अभ्यासमा, दुबै साझेदारहरू मध्ये एक जनाले गुनासोको अधिकार प्राप्त गर्नेछन्। धेरै जसो केसहरुमा यो महिला नै हो, विशेष गरी यदि उनी घर र बच्चाहरुको हेरचाहका लागि जिम्मेवार छिन। त्यो अवस्थामा, महिला प्रायः आंशिक रोजगारबाट कुनै आय वा सीमित आम्दानी हुँदैन। यस्तो अवस्थामा जसमा पुरुषले 'घरका पति' को भूमिका पूरा गरेकी छ र महिलाले क्यारियर बनाएको छ, त्यस पुरुषले सिद्धान्तमा पार्टनर गुनासो दावी गर्न सक्दछन्।
पार्टनर पोटलीको स्तर
परामर्शमा तपाई र तपाईको पूर्व पार्टनर पार्टनर गुनासो को राशि मा सहमत गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं सँगै सम्झौतामा पुग्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने, हाम्रो वकीलहरू मध्ये एक तपाईंलाई सहयोग गर्न खुशी हुनेछ। केवल हामी तपाईंलाई वार्ता प्रक्रियामा मद्दत गर्न सक्दैनौं, तर हामी तपाईंको लागि साझेदार गुनासोको मात्रा पनि निर्धारित गर्न सक्छौं। हामी मर्मत गणना गरेर यो गर्छौं।
न्यायाधीशले केवल रखरखाव प्राप्तकर्ताको आर्थिक स्थितिमा मात्र हेर्नेछैन, तर रखरखाव भुक्तानी गर्नेको आर्थिक अवस्थालाई पनि हेर्नेछ। दुबै स्थितिका आधारमा अदालतले निर्धारण गर्दछ कि तपाईंहरू मध्ये कसैलाई पनि गुनासो प्राप्त गर्ने हकदार छ कि छैन, र यदि छ भने, गुनासो को राशि। केहि केसहरूमा यो सम्भव छ कि तपाई वास्तवमा पार्टनर रखरखावको हकदार हुनुहुन्छ, तर तपाईको पूर्व पार्टनरको वित्तीय विवरणले देखाउँदछ कि ऊ वा उनी केवल पार्टनर भत्ता भुक्तान गर्न सक्षम छैनन।
गणना हिसाब गर्दै
रखरखाव गणना एक बरु जटिल गणना हो किनकि धेरै कारकहरू ध्यानमा राख्नु पर्छ। Law & More तपाइँको लागि पार्टनर गुनासो गणना गर्न खुशी हुनेछ। .
साझेदार गुनासो को राशि गुनासो प्राप्त गर्ने व्यक्तिको आवश्यकता र गुमाउँदो भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यक्तिको क्षमतामा निर्भर गर्दछ। गुनासो प्राप्तकर्ताको आवश्यकताहरू निर्धारण गर्न, कुनै पनि बच्चाहरूको लागत शुद्ध परिवार आय शून्यको 60०% को मानक मानिन्छ।
दुबै पक्षका लागि लोड-असर क्षमता गणना गरीन्छ। यस गणनाले रखरखावको लागि जिम्मेवार व्यक्तिको पर्याप्त आर्थिक क्षमता छ कि छैन भनेर पक्का गर्दछ कि भत्ता भत्ता दिन सक्षम हुनेछ। गुजारा भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यक्तिको आर्थिक क्षमता निर्धारण गर्न, उसको शुद्ध आय पहिले निर्धारित गर्नुपर्नेछ। गुजारा भत्तादाता पहिले यस आय बाट धेरै को लागत घटाउन सक्छ। यो मुख्यतया लागतहरू हुन् कि गुनासो भुक्तानी गर्नेहरूले अन्त पूरा गर्न (लागत) बनाउनको लागि खर्च गर्नु पर्छ।
अन्तमा, लोड-बोक्ने क्षमता तुलना गर्नु पर्छ। यो तुलना पक्षहरु बराबर आर्थिक स्वतन्त्रता छ जो रखरखाव को राशि को गणना गर्न प्रयोग गरीन्छ। मर्मत लेनदेनको दायरा रखरखाव torणीको दायरासँग तुलना गरिएको छ। यसको पछाडि विचार यो छ कि मर्मत लेनदेन मर्मत देयको भन्दा राम्रो वित्तीय स्थितिमा हुनु हुँदैन।
के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ तपाइँको सम्बन्ध विच्छेद पछि तपाइँको आर्थिक स्थिति कस्तो हुन्छ? सम्पर्क Law & More र हामी तपाईसँग काम गर्न सक्दछौं कि तपाईले कति गुजारा भुक्तानी गर्नु पर्ने छ वा प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
यदि तपाईं एकपक्षीय रूपमा रद्द गर्न वा पार्टनर गुनासो बदल्न चाहनुहुन्छ भने, यो अदालत मार्फत हुनुपर्दछ। हामी तपाईंको तर्फबाट अदालतमा परिवर्तन अनुरोध सबमिट गर्न सक्छौं। अदालतले पार्टनरको गुनासो परिवर्तन गर्न सक्दछ, अर्थात् वृद्धि, घटाउन वा शून्यमा सेट। कानूनको अनुसार त्यहाँ त्यहाँ 'परिस्थितिको परिवर्तन' हुनुपर्दछ। यदि अदालतले फेला पारे कि परिस्थिति परिवर्तन भएको छैन भने, तपाईको अनुरोधलाई अनुमति दिईने छैन। यो अवधारणालाई कानूनमा थप व्याख्या गरिएको छैन र त्यसैले विभिन्न परिस्थितिहरूको चिन्ता गर्न सक्छ। अभ्यासमा, यो प्राय जसो पूर्व-साझेदारहरूको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन समावेश गर्दछ।
पार्टनर गुनासोको टर्मिनेसन
पार्टनर गुनासो भुक्तानी गर्ने दायित्व निम्न परिस्थितिमा अन्त्य हुन सक्छ:
Or तपाईंको वा तपाईंको पूर्व पार्टनरको मृत्युको घटनामा;
Court यदि अदालतले तोकेको मर्मत सम्भारको अधिकतम अवधि समाप्त भएको छ भने;
Maintenance यदि रखरखाव प्राप्त गर्ने व्यक्तिले फेरि विवाह गर्दछ भने, दर्ता गरिएको साझेदारीमा प्रवेश गर्दछ वा सँगै बस्न थाल्छ;
• यदि आर्थिक अवस्था परिवर्तन भएको छ र रखरखाव प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आफ्नो लागि जीविका चलाउन सक्छ